Buugyo yar yar oo Teacup ah oo Iib ah - Ciyaaraha yaryar, Toy, Ciyaar yaroo yaryar
Buugyo yar yar oo Teacup ah oo Lagu Iibiyo
Buugyada Teacup iibinta, korsashada iyo Samatabbixinta
Caymiska Xayawaanka eeyaha ama bisadaada
Teacup Chihuahuas Iibsi, Samatabbixin, Korsasho
Ey yaryar oo iib ah, Badbaadinta, Korsashada
Bucshirooyinka Cockapoo iibinta, Samatabbixinta, Korsashada
Labisadoodle Rakhiyo iib ah, Samatabbixin, Korsasho
Ey yaryar oo qiimo jaban oo iib ah, Samatabbixin, Korsasho
Xayawaanka yaryar ee Morkie iibka, Samatabbixinta, Korsashada
Hoteellada Saaxiibtinimada leh ee Fasaxyada
Ey Ey ku soo bilaabma A
Eygu wuxuu ku bilaabmaa B
Ey yaryar oo loogu talagalay Samatabbixinta, Blog korsashada Blog
Buugyada Teacup ee Alabama
Buugyada Teacup ee Alaska
Buugyada Teacup ee ku yaal Arizona
Buugyada Teacup ee Arkansas
Rakhiyada Teacup ee California
Buugyada Teacup ee ku yaal Colorado
Buug-yada 'Teacup puppy' ee ku yaal Xaradda
Buugyada Teacup ee ku yaal Delaware
Buugyada Teacup ee Florida
Buugyada Teacup ee Georgia
Xawaaladda Teacup ee Hawaii
Rakhiyada Teacup ee Idaho
Buugyada Teacup ee Illinois
Buugyada Teacup ee Indiana
Rakhiyada Teacup ee Iowa
Rakhiyada Teacup ee Kansas
Buugyada Teacup ee ku yaal Kentucky
Buugyada Teacup ee ku yaal Louisiana
Buugyada Teacup ee Maine
Rakhiyo Teacup oo ku yaal Maryland
Buugyada Teacup ee Massachusetts
Buugyada Teacup ee ku yaal Michigan
Buugyada Teacup ee Minnesota
Rakhiyada Teacup ee Mississippi
Buugyada Teacup ee ku yaal Missouri
Buugyada Teacup ee Montana
Buugyada Teacup ee Nebraska
Buugyada Teacup ee ku yaal Nevada
Buugyada Teacup ee Magaalada New Hampshire
Buugyada Teacup ee New Jersey
Buugyada Teacup ee New Mexico
Buugyada Teacup ee New York
Rakhiyada Teacup ee Waqooyiga Carolina
Buugyada Teacup ee Waqooyiga Dakota
Buugyada Teacup ee Ohio
Buugyada Teacup ee ku yaal Oklahoma
Buugyada Teacup ee Oregon
Buugyada Teacup ee Pennsylvania
Rakhiyo Teacup Jasiiradda Rhode
Rakhiyada Teacup ee South Carolina
Buugyada Teacup ee Koonfurta Dakota
Rakhiyada Teacup ee Tennessee
Buugyada Teacup ee Texas
Buugyada Teacup ee Utah
Rakhiyada Teacup ee Vermont
Buugyada Teacup ee ku yaal Virginia
Buugyada Teacup ee Washington
Rakhiyada Teacup ee Galbeedka Virginia
Buugyada Teacup ee ku yaal Wisconsin
Buugyada Teacup ee Wayoming
Ku qor raadintaada
Ciyaaraha yaryar ee Teacup iibka ah, Sharooto, Toy yaryar iyo Ciyaar yaroo yar oo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta dhammaan 50-ka gobol. Oo ay ku jiraan Yorkie, Chihuahua, Morkie, Maltese, Poodle, Labradoodle, Cockapoo, Maltipoo, Pomeranian, Shih Tzu, Blue Sable French Bulldog, Heeler, Chow Chow Dog iyo inbadan. Hoos waxaad kaheli doontaa Spotlight Sreedlight oo badan oo ah Teacup, Miniature, iyo Mini Dog Breeds. Waxaan ku soo darnay macluumaad badan si aan kaaga caawino raadintaada saaxiibka ugu fiican qoyskaaga.
Buugyada Teacup ee laga iibsado Alabama AL
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Alabama, AL.
Eydan ayaa laga yaabaa inay yaryihiin, laakiin waxay leeyihiin shakhsiyadaha ugu macaan. Yorkshire Terrier jeebka ka samaysan wuxuu ku raaci karaa boorso oo wuxuu sameyn karaa eyga saxda ah. Waxay ku luqmaan qeylada dheer wayna noolaan karaan 12-15 sano. Cabbirku wuu kala duwan yahay laakiin 2-5 lbs waxay ku habboon yihiin cabbirka waxbaridda.
Buugyada Teacup ee Lagu iibinayo Alaska AK
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Alaska, AK.
Baraha yar ee Chihuahua runti waa eey yar. Waxay noqon karaan kuwo yar sida 2 ilaa 4 rodol oo waxaa loo tixgeliyaa waxbarid. Waxay u muuqdaan inay jilicsan yihiin wax ka badan noocyada kale waxayna noqon karaan eey hal qof ah. Intooda badani waxay jecel yihiin inay jeexjeexaan oo ay sameeyaan eeyo weyn. Kala tasho qoyska oo dhan waqti hore haddii ay suurogal tahay. Midabada waxaa ka mid ah midab madow, caddaan, cawlan, kareem, shukulaato, dahab iyo waxyaabo badan oo kaladuwan oo ay ka mid yihiin isugeynta iyo taranka noocan ahi wuxuu ku jiraa labada nooc ee timo dhaadheer iyo kuwa gaabanba.
Buugyo yar yar oo Teacup lagu Iibiyo Arizona AZ
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Arizona, AZ.
Pom-ka loo yaqaan 'Pupupom' waa eey yar, firfircoon oo qiimo badan. Waxay u egyihiin culeys u dhexeeya 2 iyo 5 rodol in loo tixgeliyo cabirka waxbaridda. Waxay ku yimaadaan midabyo kala duwan oo ay ka mid yihiin casaan, oranji, cad ama kareem, buluug, bunni, madow oo qaarkood ay qayb ka yihiin. Iyagu waa dad walaalo ah, saaxiibtinimo leh una baahan jimicsi sida dhammaan noocyada kale.
Buugyo yar yar oo Teacup lagu iibinayo Arkansas AR
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Arkansas, AR.
Noocani waa kala duwanaansho cabir ah oo aan rasmi ahayn oo Poodle ah. Waxa kale oo loo yaqaan Toy Poodle. Waxay saaxiibo fiican u sameeyaan shakhsiyaadka iyo qoysaska labadaba. Caqli, Jacayl, Daacadnimo iyo Bulsho. Waxay ku yimaadaan midabo badan oo ay ka mid yihiin madow, lacag, buluug, cawlan, khudaar, beige, bunni, casaan iyo caddaan. Waxay u muuqdaan inay yihiin 10 inji ama ka yar, oo miisaankoodu ka yar yahay 5 rodol si loo tixgeliyo waxbarid ama cabbirka toy.
Buugyada Teacup ee Doodaha ah ee Kalifoorniya CA
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee California, CA.
Maltese-ka loo yaqaan 'Maltese' waa magac loo bixiyay cabirka ugu yar ee noocyada yaryar ee horeba loo yaqaan. Way ciyaar badan yihiin waxayna leeyihiin awood buuxda ilaa ay seexato. Noocaani wuxuu ka dhigayaa eey weyn oo waxaad ku qaadan kartaa boorsadaada haddii ay yar tahay. Waxay ku noolaadaan si fiican nolosha guriga laakiin waxay xasuustaan ​​dhammaan digaagga inay u baahan yihiin jimicsi. Baraha Malitese wuxuu noqdaa inta u dhaxaysa 2 iyo 4 rodol.
Buugyada Teacup Iibka ee Colorado CO
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo ururada samatabbixinta ee Colorado, CO.
Eygan naqshadeeyaha isku-dhafan wuxuu ka yimaadaa taranka Poodle iyo Maltese. Maltipoo wax barista waa mid jilicsan oo kalgacal leh, oo caan ku ah eyda weyn ee qoyska waxaana loo tababari karaa in ay noqdaan eeyaha lagu daweeyo dabeecadahooda macaan. Midabada waxaa ka mid ah lacag, madow, caddaan, kareem madow, cawlan, bunni khafiif ah iyo waxyaabo kale oo badan. Qiyaasta 8 ilaa 14 inji dherer ah iyo 5 ilaa 15 rodol guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa cabirka waxbaridda.
Buugyo yar yar oo Teacup ah oo Lagu Iibinayo Connecticut CT
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee ku yaal Connecticut, CT.
Noocani yar-yar wuxuu u eg yahay culeys ka hooseeya 7 rodol in loo tixgeliyo cabbirka waxbaridda. Caadi ahaan si wanaagsan ayaa loo maareeyaa oo waxay jecel yihiin ciyaarta iyo raaxada. Waa wax cajiib ah oo feejignaan leh laakiin sidoo kale sameeya sariir fiican ama eey sariiro leh. Midabada waxaa ka mid ah caddaan, cusbo iyo basbaas, madow oo leh calaamado caddaan, qalin platinum, basbaas beerka ah, madow iyo lacag, shukulaato ama beerka iyo waxyaabo kaloo badan. Noocani yar-yar wuxuu sidoo kale u baahan yahay jimicsi iyo daryeel ku habboon daryeelka si uu ugu noolaado nolol dheer oo ah 12-14 sano.
Buugyada yar yar ee Teacup iibka ah ee ku yaal Delaware DE
Buugyada yar yar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa Samatabbixinta ee Delaware, DE.
Morkie waa naqshadeeye ama isku-dhafan kaas oo lagu abuuray curyaaminta Maltese iyo Yorkshire Terrier. Iyada oo labada noocba ay yihiin cabirka toy, nooca waxbariddu waxay ka timaaddaa taranta waalidiinta yar. Cabbirka cuncunka wuxuu ujiraa 3 ilaa 5 rodol. Waxay sameeyaan eeyo weyn oo jaceyl oo jecel inay ciyaaraan oo socodsiiyaan. Aad ayey ugu wanaagsan yihiin carruurta iyo qoysaska siinaya inay si wanaagsan bulshada ula dhaqmaan markay dhalanayaan. Midabada qaarkood waxaa ka mid ah madow, bunni, madow iyo caddaan, dahab iyo madow iyo dahab. In yar oo ku filan in lagu qaato boorso oo ciyaar ku filan socod gaaban leh.
Buugyada Teacup Iibka Florida FL
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa Samatabbixinta ee Florida, FL.
Teacup Faransiis Bulldog
Noocani yar-yar wuxuu caadi ahaan helayaa ereyga waxbaridda isagoo ku jiraya xaddiga miisaanka ee 10-14 lb. Dhererka dhererkiisu waa 11-12 inji. Frenchie waa sharaf leh wayna adkaan kartaa laakiin badiyaa waxay jecel yihiin in la jeclaado oo la jeclaado. Waxay ku yimaadaan midabbo badan oo ay ka mid yihiin lilac dhif ah, shukulaato, buluug iyo caano, madow, sable, buluug, madow iyo tan iyo inbadan. Iyagu waa nooc firfircoon oo u baahan jimicsi maalin kasta. Socodka gaagaaban ee ku dhex yaal beerta nasashada ama ku ciyaarida guriga waa feker weyn Waxay jecel yihiin inay calalaan waxyaabaha caruurtu ku ciyaaraan iyo sida nooc kasta oo ay yihiinba, waa inaad booqataa takhtarkaaga bil kasta si loo baaro.
Buugyada Teacup Iibka ee Georgia GA
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa Samatabbixinta ee Georgia, GA.
Buugyada Teacup ee laga iibiyay Hawaii HI
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Hawaii, HI.
Buugyada yar yar ee Teacup Iibka ee IDka Idaho
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Idaho, ID.
Buugyada Teacup Iibka ee Illinois IL
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Illinois, IL.
Buugyada Teacup Iibka Indiana IN
Buugyada Teacup iyo Dogs ee korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Indiana, IN.
Buugyada Teacup Iibka Iowa IA
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Iowa, IA.
Buugyada Teacup ee laga iibiyay Kansas KS
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa Samatabbixinta ee Kansas, KS.
Buugyo yar yar oo Teacup lagu Iibiyo Kentucky KY
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Kentucky, KY.
Buugyada Teacup ee Loogu Talagalay Louisiana LA
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa Samatabbixinta ee Louisiana, LA.
Buugyo yar yar oo Teacup ah ayaa Iibinaya Maine ME
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Maine, ME.
Buugyada yar yar ee Teacup ee lagu iibinayo Maryland MD
Buugyada yar yar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo hay'adda Samatabbixinta ee Maryland, MD.
Buugyo yar yar oo Teacup lagu iibinayo Massachusetts MA
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa Samatabbixinta ee Massachusetts, MA.
Buugyo yar yar oo Teacup lagu Iibiyo Michigan MI
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Michigan, MI.
Buugyo yar yar oo Teacup ah oo Lagu Iibiyo Minnesota MN
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Minnesota, MN.
Buugyada loo yaqaan 'Teacup puppy' ee laga iibinayo magaalada Mississippi MS
Buugyada Teacup-yada iyo eeyaha loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Mississippi, MS.
Buugyada Teacup ee laga iibiyay Missouri MO
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Missouri, MO.
Buugyada Teacup For Sale ee Montana MT
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Montana, MT.
Buugyada yar yar ee Teacup for Sale ee Nebraska NE
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Nebraska, NE.
Buugyo yar yar oo Teacup Lagu Iibinayo Nevada NV
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Nevada, NV.
Buugyada Teacup ee laga iibsado New Hampshire NH
Buugyada yar yar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee New Hampshire, NH.
Buugyo yar yar oo Teacup ah oo Lagu Iibiyo New Jersey NJ
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa Samatabbixinta ee New Jersey, NJ.
Buugyo yar yar oo Teacup ah oo Lagu Iibiyo New Mexico NM
Buugyada yar yar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee New Mexico, NM.
Buugyada Teacup ee Loogu Talagalay Magaalada New York NY
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee New York, NY.
Buugyada Teacup For Sale ee Waqooyiga Carolina NC
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee North Carolina, NC.
Buugyada yaryar ee Teacup Iibka Waqooyiga Dakota ND
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee North Dakota, ND.
Buugyada Teacup ee Loogu Talagalay Ohio OH
Buugyada yar yar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Ohio, OH.
Buugyada Teacup ee laga iibsado Oklahoma waa hagaag
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ah ee Oklahoma, Ok.
Buugyada yar yar ee Teacup Iibka Oregon AMA
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Oregon, AMA.
Buug-yaraha Teacup ee lagu iibinayo Pennsylvania PA
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Pennsylvania, PA.
Rakhiyo Teacup Iib Ah Oo Ku Saabsan Rhode Island RI
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Jasiiradda Rhode, RI.
Buugyada Teacup For Sale South Carolina SC
Buugyada Teacup iyo Dogs ee korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee South Carolina, SC.
Buugyo yar yar oo Teacup lagu Iibiyo Koonfurta Dakota SD
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee South Dakota, SD.
Buugyo yar yar oo Teacup lagu Iibiyo oo ku yaal Tennessee TN
Buugyada yaryar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Tennessee, TN.
Buugyo yar yar oo Teacup lagu iibinayo Texas TX
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Texas, TX.
Buugyada Teacup ee Doodaha Utah UT
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Utah, UT.
Buugyo yar yar oo Teacup ah oo Lagu Iibiyo Vermont VT
Buugyada yar yar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samatabbixinta ee Vermont, VT.
Buugyada Teacup ee laga iibsado ee Virginia VA
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Virginia, VA.
Buugyada Teacup Iibka ee Washington WA
Buugyada yar yar ee Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa Samatabbixinta ee Washington, WA.
Buugyada Teacup For Sale ee Galbeedka Virginia WV
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee West Virginia, WV.
Buugyada yar yar ee Teacup iibka ah ee Wisconsin WI
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo hay'adda Samatabbixinta ee Wisconsin, WI.
Buugyada yar yar ee Teacup iibka ah ee Wyoming WY
Buugyada Teacup iyo eeyo loogu talagalay korsashada iyo Samatabbixinta eeyaha eyga iyo kuwa samata bixinta ee Wyoming, WY.
Maxaa ka dhigayaa eey waxbarista?
Sida ay tilmaameyso Naadiga Kennel ee Mareykanka, canines-ka waxaa loo tixgelin karaa “waxbarid” haddii ay miisaamaan meel u dhexeysa laba iyo shan rodol, oo ay cabbiraan wax ka yar 17 inji marka gebi ahaanba la horumariyo.
Intaa waxaa sii dheer, noocyada "toy" waxay ku daraan wixii canaan ah oo culeyskiisu ka yar yahay 15 rodol, sidaa daraadeed baraha wax lagu baro waxaa loo arki karaa inay tahay qeyb weyn oo ka mid ah "toy", iyo sidoo kale
Intee la egtahay eeyaha yaryar ee wax barista ku nool yihiin?
Fursadda off ee aad ku sameysay sahamintaada si wax ku ool ah si aad uhesho dokumentigaaga waxbarista, waxaad ku dhammaan kartaa xulasho ilaa 15 sano.
Canines yar-yar ayaa sameysan doona, guud ahaan, cimri dheeri ka dheer noocyada waaweyn, iyo markasta oo la siiyo daaweynta ugu fiican ee suurogalka ah, barashada luqaddaada waxay kuu horseedi kartaa nolol dheer, qancin.
Waa imisa qiimaha waxbariska eeyaha yar yar?
Koobabkan waxaa loo yaqaanaa 'waxbarid' waxaana si joogto ah loogu iibiyaa qiimo aad u sarreeya.
Waa imisa immisa qiimihiisu eey yar yahay eeyaha yar?
Qiimaha nooca eyga yar ee wax barta ayaa laga yaabaa inuu si habsami leh u ordo meelkasta oo $ 750 iyo $ 2,000 ah!
Ma inaad ku socotaa eeyo yar yar oo baraya?
Xakamaynta eyga yar ee wax barista ayaa muhiim u ah sida xakamaynta nooc kale oo ka mid ah noocyada shinnida.
Ujeedada aasaasiga ah ee ka dambaysa tani waa cunug yar inkasta oo wax waliba ay u baahan yihiin maalin kasta qayb ka mid ah hawada dibedda.
In kasta oo xakameyntu laguma barbar dhigi karo koodh garaaca weyn, haddana wali waa loo baahan yahay.
Waa maxay puppy-ka waxbarasho ee ugu quruxda badan?
Iyadoo aan loo eegeynin cabirka (Teacup, Toy, Standard, Giant), nooca Poodle waxaa xusid mudan inuu yahay mid ka mid ah noocyada ugu quruxda badan uguna halista badan maanta.
Intee ayey la egtahay xaydhka barashadu?
Si aan rasmi ahayn, puppy-ka waxbariddu waa fargeeto dhacdo kasta 1 sano jirta oo cabirkeedu yahay 17 inji ama ka yar.
Iyagu waxay ku qiyaaseen 4 rodol ama ka yar horumarka.
Si kastaba ha noqotee, ma jiro qof loo baahan yahay cabbir maadama eeyaha yar yar ee wax baridda aysan ahayn jihayn ama amar ku haynta.
Maxey u baahan yihiin waxbarista da'da yar?
Teacup doggies dhalinyarada waa in lagu dhiiri galiyaa inay si joogto ah hodanka u cunaan.
Raadi nafaqo qasacadaysan ama qallalan oo ay kujiraan hagaajin sida ukunta, digaagga, waxyaabaha dabiiciga ah, khudaarta cagaaran, iyo miraha omega 3 ee dufanka badan.
Sidoo kale, hubi in nafaqada aad ka dooratid ay ku jirto Karo syrup.
Teacup-yada yar yari waxay u janjeedhaan gulukoos hooseeya iyo hagaajintaani waxay gacan ka geysan kartaa isku dheelitirka taas.
Xirmooyinka wax lagu baro ma wax weynbaa burburin kara?
Meel yar iska geyso milkiilaha bina aadamka, waxaadna ku ogaan doontaa isha diyaarinta ee ku dhiirrigelisay canine-yarta wax barida in ay wax badan ku qodaan sababta oo ah in dhammaan carruurtii wax baraysa eey wax bartaan.
Dhowr qof ayaa ku dhufay ciddiyaha madaxa - taasi ma aha mid ku saabsan taranka, iyo xajmiga xayawaanka.
Fursadda bannaanka ee aad ugu baahan tahay inaad haysatid eey yar oo aamusnaan deggan oo xasilloon, ka aamuso oo habeeyaan.
Waa kuwee noocee yar ee ugu dadaalka badan ee kudhisan guriga?
Si ka yar sida caadiga ah Schnauzer ayaa ah mid ka mid ah noocyada ugu dadaal yar uguna yar ee loo yaqaan 'housetrain'.
Dhowr caruur yar yar oo xijaaban ayaa xitaa la qori doonaa marka ay ka tagayaan guriga canaaniinta, sida iska cad, haddii aad beddesho farsamooyinka diyaarinta (isticmaalidda barkimooyinka halkii cawska, tusaale ahaan) waxay taasi horjoogsan doontaa xoogaa yar.
Sababtoo ah waxbarista yar yar ee da'da yar, calool-yarida iyo awooda sare ee lagu gubo kalooriyeyaasha, jaangooyooyinka fudfudud iyo waxbaridda waxay u baahan yihiin inay cunaan wax kabadan dhowr jeer maalintii.
Waa inay cunaan 4-5 saacadood kasta ugu dambeeya GARGAARKA iyo digaagga dheeriga ah ee TINY. Waa inay cunaan 3-4 saacadood kasta.
Immisa nooc oo ey yaryar oo waxbarid ah ayaa jira?
Maaddaama eyda yaryar ee 'Teacup puppy' culeyskeedu uusan ka saarin heerka AKC ee nooca toy, waxaad dhab ahaantii yeelan kartaa nooc kasta oo loo yaqaan barasho.
Waxa inta badan koriyayaashu u tixgeliyaan inay tahay 'Teacup' waa liin culayskiisu ka hooseeyo 4 rodol oo dhererkiisu ka hooseeyo 17 inji dherer.
Astaamahan, waxaa jira 6 nooc oo hidde ah oo Teacup ah.
Maxaad quudinaysaa arday waxbarista?
Waxyaabaha loo yaqaan 'Teacup pups' waa in lagu dhiiri galiyaa inay si joogto ah hodanka u cunaan.
Intaa waxaa sii dheer, hubi in nafaqada nafaqada ee aad dooratay ay ku jirto Karo syrup.
Koobabyada Teacup waxay u janjeedhaan gulukoos hooseeya iyo hagaajintaani waxay gacan ka geysan kartaa isku dheelitirka taas.
Waqtigan xayawaanka badan ee eyda, badbaadada iyo hoyga ayaa u rari doona gobolada soo socda: Alabama AL - Alaska AK - Arizona AZ - Arkansas AR - California CA - Colorado CO - Connecticut CT - Delaware DE - Florida FL - Georgia GA - Hawaii HI - Idaho ID - Illinois IL - Indiana IN - Iowa IA - Kansas KS - Kentucky KY - Louisiana LA - Maine ME - Maryland MD - Massachusetts MA - Michigan MI - Minnesota MN - Mississippi MS - Missouri MO - Montana MT - Nebraska NE - Nevada NV - New Hampshire NH - New Jersey NJ - New Mexico NM - New York NY - North Carolina NC - North Dakota ND - Ohio OH - Oklahoma ok - Oregon AMA - Pennsylvania PA - Rhode Island RI - South Carolina SC - South Dakota SD - Tennessee TN - Texas TX - Utah UT - Vermont VT - Virginia VA - Washington WA - Washington, DC - Galbeedka Virginia WV - Wisconsin WI - Wyoming WY - Waan ka xunahay in aan u dirno Hawaii HI.
Teacup Faransiis Bulldog,
Teacup Shiinees ah oo Xiran,
Teacup Talyaani Greyhound,
Teacup Ruush Tsvetnaya Bolonka,
Teacup Soft Fox Terrier,
Da'yar Mareykan Bully,
Adhijirka Australia ee Yar,
Da'yar Olde Ingiriis Bulldogge,
Adhijirka Jarmalka ee yar,
Xadka Yar ee Collie,
Da'yar Faransiis Bulldog,
Ingriis Bulldog yar,
Miniha Lhasa Apso,
Yar Yar Bichon Frize,
Yar Shih Tzu,
Yaryar Yorkshire Terrier,
Yar Yar Brussels Griffon,
Nooc yar oo yar oo Pincher ah,
Yar Greyhound Talyaani ah,
Rat Termino Yar,
Yar Yar Pumi,
Yariisow Ruush Tsvetnaya Bolonka,
Ingiriisiga Yar ee Cocker Spaniel,
Xuddunta Xadka Yar,
Yar Yar Boston Terrier,
Cairn Terrier Yar,
Minicker Cocker Spaniel,
Yar Yar Jack Russell Terrier,
Yar Yar Norwich Terrier,
Miniem Pembroke Welsh Corgi,
Yar-yar Shetland Sheepdog,
Yaryar Silky Terrier,
Yar Yar Yar Ter Terrayda Fox,
Yar Yar West Highland White Terrier,
Mini Faransiis Bulldog,
Mini Greyhound Talyaani ah,
Mini Jaban Jabbaan,
Mini Ruushka Tsvetnaya Bolonka,
Mini Fighter Fox Terrier,
Macluumaadka kor ku xusan ayaa kaa caawin doona inaad go'aan ka gaarto nooca eyga, badbaadinta eeyga ama hoyga ugu habboon adiga iyo qoyskaaga. Wax xiriir ah lama lihi cidkasta oo liis gareysan sidaa darteed aad ayey muhiim u tahay inaad sameysid daraasad aad adigu sameyso oo aad hubiso inay ku haboon tahay adiga iyo qoyskaaga.
Ogeysiis muhiim ah Google, Yahoo, Bing & Qalabyada kale ee Goobidda:
Liisaskaan waxaa lagu meeleeyay halkan lacag la’aan & waxaa loogu talagalay ujeedooyin macluumaad oo keliya mana ahan xiriirinno lacag bixin ah.
FADLAN AKHRIS: Iska jir khiyaanooyinka ku weydiista inaad lacag u dirto ururka midowga reer galbeedka, gram lacagta ama Wal-Mart Wal-Mart. Taladaydu waxay tahay inaad puppy-kaada shaqsi ku geyso oo aad markaas bixisid. Had iyo jeer ku kulan meel dadweyne & marna kaligaa. Haddii aad go'aansato in eey yar la soo dejiyo waxaan soo jeedinayaa PayPal ama inaad bixiso markaad bixineyso eeyga.
Fadlan La Wadaag
U turjun Bogga Afkaaga
Bogagga Ugu Caansan
Sida Loo Sameeyo Maaskaro Wajiga
Sida loo Sameeyo Gacanta Sanitizer
Teacup Chihuahuas iib, korsasho
Buugyada Teacup Shih Tzu ee Iibka, Korsashada
Buugyada Teacup Yorkie ee iibka ah, korsashada
Bucshirooyinka Cockapoo iibka ah, korsashada
Buugyada Teacup Morkie ee iibka ah, korsashada
Labisdoodle Ooyooyinka La Iibiyo, La Korsado
Ey yaryar oo iib ah, korsasho
Buugyada Teacup iibinta, korsashada
Buugyada Teacup-ka ah ee iibka iyo korsashada
Xuquuqda daabacaadda - The OceanWP Theme by Nick